नेपाल आज | प्रचण्ड र ओली पद र पैसा पाए गणतन्त्रकै हत्या गर्न तयार
प्रचण्ड र ओली पद र पैसा पाए गणतन्त्रकै हत्या गर्न तयार
कांग्रेसका शीर्ष भनिएका सबै नेता विदेशीको गुलाम
सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ‘मेरो सरकार’ भनी सम्वोधन गरेको विषयले सडक र सदन तताएको छ । पक्ष बिपक्षमा बहस चर्किएको छ । पक्षमा भन्दा बिपक्षमा आवाज बढी गुञ्जयमान छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो व्यक्तिगत इच्छामा ‘मेरो सरकार’ भन्ने शब्द नीति कार्यक्रममा राखेको स्पष्ट भैसकेको छ । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत आफूले हेर्दा सो शब्द नभएको तर पछि संसद्मा एकैपटक सुन्दा थाहा पाएको खुलासा गरिसकेका छन् । स्वयं सत्तारुढ पार्टी नेकपा भित्र यो विषयमा मतान्तर बढेको छ ।
वर्तमान संघात्मक गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै प्रधानमन्त्री ओली सन्तुष्ट नभएको आशंका विगतदेखि गरिदै आएको छ । उनी वाध्यात्मकरुपमा यो व्यवस्था मानिरहेका छन् । खासमा उनी संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र नै उल्ट्याउन चाहन्छन् भन्ने आरोप पनि छ । यस्तोबेला गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने गरी राष्ट्रपतिलाई महारानी बनाउने शैलीमा उनी लागेको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ ।
पुराना नेता एवम नेपाली कांग्रेस बीपीका अध्यक्ष हरिबोल भट्टराईले त वर्तमान नेकपा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई महामहारानी बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
भट्टराई भन्छन्, ‘ राष्ट्रपतिका लागि महङ्गो गाडी किन ? महङ्गो हेलिकप्टर के का लागि ? प्रहरी तालिम केन्द्र सारेर राष्ट्रपति भवन ठूलो बनाउनुपर्ने के का लागि ? यताउता सवारी हुँदा स्थलगतदेखि हवाइ ट्राफिक जाम के का लागि ? यो सबै महामहारानी बनाउने तयारी नै हो । ’
‘हुँदाहुँदा राष्ट्रपतिको हातबाट विवादित मानिसहरुलाई सम्मान र पुरस्कार वितरण गरिन्छ । गम्भीर अपराधमा मुछिएकाहरुको सजाय मिनाह गरिन्छ । यो सबै कम्युनिष्ट सरकारले राष्ट्रपतिलाई हिजोका राजामहाराजाको जस्तै महारानी बनाउन खोजेको मात्र हो ।’ भट्टराई भन्छन् ।
ओली र प्रचण्ड राष्ट्रघाती
नेता भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहालमा राजनीतिक सिद्धान्त नै समाप्त भैसकेको आरोप लगाए । दुवै नेता पद र पैसाका लागि जे पनि गर्न तयार भएकाले मुलुकको वर्तमान र भविश्य के हुन्छ भन्ने निश्चित हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।
२०६२/०६३ को आन्दोलन राजसंस्था फाल्ने थिएन । निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने मात्र थियो । हिन्दू राष्ट्र फाल्ने थिएन, रातारात धर्मनिरपेक्ष बनाए । संघीयता पनि थिएन, जबरजस्ती बिखण्डनमा लगे । यीनीहरु विदेशीका गोटी भए । अझ नेकपाका नेताहरु पद र पैसा पाउने पाउने भएपछि जे पनि गर्छन् ।
अहिले सत्तामा भएपनि प्रधानमन्त्री ओली र दाहालको भरोसा छैन । यीनीहरु पद र पैसाका लागि गणतन्त्रकै हत्या गर्न पनि तयार हुन्छन् । अहिले भैरहेका यीनका गतिविधिले यो व्यवस्थालाई मद्दत पुर्याएको छैन । यीनीहरु लुट्नमा मात्र केन्द्रीत छन् ।
कांग्रेसका शीर्ष नेता सबै दलाल
२०७२ सालको संविधान जारी गर्ने कांग्रेस नेता तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला, हालका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला, डा. रामशरण महत सबै विदेशीका दलाल हुन् ।
यी सबै नेताहरुले विदेशीको पैसा खाएर यो देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाए । त्यही भएर विदेशीले खेल्नसम्म खेलिरहेका छन् । अझ पश्चिमा शक्तिहरुको चलखेल निकै बढेको छ । यसले मुलुकको धार्मिक, सांस्कृतिक, मूल्य, मान्यता र परम्परा मात्र मासेको छैन, राष्ट्रको अस्तित्व नै खतरामा पारेको छ ।
जेठ ५ गतेबाट आन्दोलन
सनातन संस्कृति समाज, नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले मुलुकलाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न जेठ ५ गतेबाट देशब्यापी आन्दोलन थाल्ने तयारी भैरहेको जानकारी दिए । यसका लागि सबै हिन्दूवादी संघ संस्था, राजनीतिक दल, नागरिक संगठन र सर्वसाधारणलाई एकबद्ध गराउने प्रयास भैरहेको छ
बढीमा एक बर्ष भित्र आन्दोलनले चरम लिने र संवैधानिक राजसंस्थासहित मुलुक हिन्दू राष्ट्र हुने भट्टराईको दावी छ ।